Homo erectus: astaamaha, asalka, horumarka iyo astaamaha | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 13/10/2021 17:54 | Ciencia
Waxaan ognahay in qofka bini -aadamka ah uu soo maray noocyo badan iyo horumar ilaa aadamaha hadda jira. Noocyadayada hadda jira, the sapiens faaftay, waxay ka timaaddaa noocyada kale. Mid ka mid ah iyaga ayaa ah erectus faaftay. erectus faaftay waa nin qadiim ah oo ku noolaa meelo kala duwan oo dhulka ah intii lagu jiray qaybtii Pleistocene. Muunadda ugu da'da weyn ayaa laga helay Demanisi, Georgia, waxayna taariikhaysan tahay qiyaastii 1,8 milyan oo sano. Helitaankii ugu horreeyey ee noocyadaan wuxuu ka dhacay 1891 jasiiradda Aasiya ee Java, oo hadda ka tirsan Indonesia.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato erectus faaftay, sifooyinkeeda iyo taariikhdeeda.
1 Asalka Homo erectus
3 Astaamaha Homo erectus
Asalka ah erectus faaftay
Ninkan qadiimiga ah wuxuu dhulka ku jiray muddo dheer. Fikradaha ayaa la isku qasan yahay taariikhda bakhtiyey. Qaar ka mid ah khubarada cilmiga dadka ayaa aaminsan inay dhacday ilaa 300.000 oo sano ka hor, halka kuwo kalena ay sheeganayaan inay dhacday 70.000 oo sano ka hor. Tani waxay keentay in khubarada qaar rumaystaan ​​inuu la nool yahay homo sapiens, laakiin tani ma aha mowqifka ugu badan maanta.
Asalka ah erectus faaftay sidoo kale waa muran. Qaabkan, ayaa qof ku riday Afrika, in kasta oo dad badan oo ku takhasusay cilmiga dabeecadda ay diidan yihiin oo ay wacaan muunadda laga helay Homo ergaster. Taageerayaasha jagadan waxay ku andacoodaan in erectus faaftay Waxay ku dhalatay Asia.
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee ninkan hore waa awoodiisa cranial, taas oo ka fiican ta noocyadii hore. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee isbeddelkan keenay ayaa ah helidda sida loola tacaalo dababka, taas oo horseedday nafaqayn hagaagsan.
erectus faaftay waa mid ka mid ah awoowayaashii Homo sapiens. Marxaladda horumarinta aadanaha ee ay erectus faaftay Waa mid ka mid ah marxaladaha aan la aqoon, sidaa darteed dhowr aragtiyood oo kala duwan ayaa wada nool. Sidaa darteed, mid iyaga ka mid ah wuxuu Afrika ku soo laabtay 1,8 milyan oo sano ka hor.
Waa in la ogaadaa in khubaro kale ay xaqiijiyeen in haraadiga laga helay qaaradda ay leedahay nooc kale oo la mid ah, Ergaster. Qof kastaa wuxuu ku raacsan yahay xaqiiqda ah in muuqaalkal Homo erectus, dadyowgii hore waxay noqdeen reer guuraa waxayna ka tageen Afrika.
Helitaankii ugu horreeyay ee erectus faaftay waxay ka dhacday Bariga Aasiya, laakiin weli waxaa laga helay Eurasia. Meelaha fog -fog ee laga helo wasakhda, guusha noocyadan ayaa si sax ah loo xaqiijin karaa. Tani waxay abuurtaa kala duwanaansho jireed iyo dhaqan oo aad u yar, maxaa yeelay waa inay la qabsadaan xaaladaha kala duwan ee gobol kasta. Tusaale ahaan, cimilada Yurub xilligaa waxay ahayd mid qabow oo haddaan la helin dab, tani waxay noqon lahayd dhibaato weyn.
Dhammaan khubaradu waxay isku raacsan yihiin dabeecadda reer guuraaga Homo erectus. Caddaymaha la helay waxay tilmaamayaan inay ahayd hominidkii ugu horreeyay ee ka taga Afrika. Muddo sanado ah, waxay gaartay Koonfur Bari Asia.
Mala -awaalka ugu caansan ayaa ah inaad ka faa'iideysan karto buundada barafka ee la sameeyay xilligii barafka ee safarkan. Ballaarinta ayaa keentay weli waxay ka muuqataa qaybo ka mid ah Indonesia, Shiinaha, Yurub ama Aasiya Dhexe.
Sida dhammaan fossil -ka hadha, ma fududa in la go'aamiyo astaamaha jirka iyo noolaha. Saynisyahannadu waxay tixgeliyaan cabbirro kala duwan si ay u qiyaasaan, gaar ahaan dhererka ama qaabka dhakada. Tusaale ahaan, ilkaha ayaa bixiya macluumaad aad muhiim u ah oo ku saabsan cuntada iyo caadooyinka kale ee muhiimka ah.
Xaaladdan oo kale, waa inaan ku darno jiritaanka dhowr nooc hoosaadyo, kuwaas oo leh astaamo waxyar ka duwan. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, sifooyinka qaar ka mid ah erectus faaftay taas oo u muuqata mid si weyn loo aqbalay.
Tilmaamaha erectus faaftay
Wax yar baa laga ogyahay maqaarka maqaarka erectus faaftay. Sidaan wada ognahay, waxay leedahay qanjirro dhidid ah, laakiin dhuuban iyo dhumuc midna ma leh. Marka la eego lafaha, dhismaha miskaha ee erectus faaftay waxay la mid tahay tan aadanaha maanta. Si kastaba ha ahaatee, way ka weyn tahay kana xoog badan tahay. Wax la mid ah ayaa ku dhacay femur -ka, oo intii hadhaagu soo muuqdeen, way sahlanayd in wax la barto. Marka lagu daro baaxadeeda sare, calaamado gaar ah oo galinta muruqa ayaa tilmaamaya in jidhku yahay mid xooggan oo adag.
El erectus faaftay, sida magacu tilmaamayo, wuxuu ku socdaa laba cagood, oo la mid ah sapiens faaftay. Markii hore waxaa loo maleeyay in dhererka celceliska ragga uu aad u yar yahay, qiyaastii 1,67 mitir. Si kastaba ha ahaatee, hadhaagii cusbaa ayaa bedelay habkan fekerka. Hadda waxaa la qiyaasayaa in qof weyn uu gaari karo dherer 1,8 mitir ah, kaas oo ka dheer homininkii hore.
Garka ee erectus faaftay Isaguna aad buu u xoog badan yahay, inkasta oo aanu gadh lahayn. Xaqiiqda ah in ilkaha ay yaryihiin ayaa soo jiidatay dareen badan. Khubarada Paleontologists waxay ogaadeen in marka jidhku sii weynaado, uu yaraado xajmiga ilkaha.
Sidoo kale, muruqyada daanka ayaa u muuqda inay yaraadeen dhuuntana cidhiidhi gashay. Waxaa suurtogal ah in joogitaanka dabka iyo hilibka la kariyey oo si sahlan loo soo saaro saamayntaas. Qalfoofka erectus faaftay waxay leedahay saddex sifo oo kala duwan. Midda hore waa lafta supraorbital ee toosan, inkasta oo aysan lahayn qaabkaas oo laga helay Giriigga iyo Faransiiska. Dhinaca kale, waxay leeyihiin qalfoofka sagittal ee dhakada, taas oo aad ugu badan Aasiya. Kuwani sidoo kale waa kuwa leh dusha sare ee occipital.
Mid ka mid ah su'aalaha soo socda ee ku saabsan erectus faaftay waa haddii uu adeegsaday luuqad lagu hadlo intii uu jiray. Hal aragti oo ku saabsan noocyada ayaa tilmaamaysa inay yihiin dadkii ugu horreeyay ee u adeegsada bulshada ay abuureen.
Way adag tahay in la ogaado haddii aragtidan ay sax tahay iyadoo la baranayo fossils. Haddii bayoolojigu u muuqdo inuu taageerayo xaqiiqadan, maxaa yeelay waxay leeyihiin qaab dhismeed maskaxeed iyo mid afka ah si ay tan u sameeyaan.
Daraasad dhowaan uu sameeyay Daniel Everett, hormuudka Kulliyadda Fanka iyo Sayniska ee Jaamacadda Bentley ee Massachusetts, ayaa xaqiijiyay mala -awaalkaan. Iyada oo ku saleysan natiijooyinkooda, eraygii ugu horreeyey ee ay ku hadlaan dadyowga qadiimiga ah waxa ku dhawaaqay xubno ka tirsanl Homo erectus.
Cuntadu waa mid ka mid ah dhinacyada ugu xiisaha badan ee cilmi baarista Homo erectus. Si gaar ah, gaar ahaan, ka dib markii la ogaaday sida loola macaamilo isbeddellada dhacay dabka ka dib. Markii hore waxay ahayd xayawaan wax walba leh, si ay u hesho hilib waxay isticmaashay hadhaagii bakhtiga xoolaha. Maxaa ka sii badan, Wuxuu kaloo ururiyaa khudaarta iyo cawska, isagoo raadsanaya cunto sida ugu macquulsan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto erectus faaftay iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » erectus faaftay